Nzira yekuvaka sei inoshanda yeEnglish search engine optimization urongwa?
Mumazuva edu Amazon inonzi inoshandiswa uye inonyanya kubhadhara ecommerce platform uye inenge mamiriyoni makumi masere emamiriyoni anoshandiswa. Amazon maitiro ehurongwa akavakwa nenzira yakadai yekuita vashandisi kutenga zvose zvinowanikwa zviripo pachikuva. Vanoedza kupa vanotengesi vane unhu hwakanakisisa hwekutenga zvigadzirwa kuitira kuti vadzoke zvakare. Nekubatsirwa kweA9 algorithm, Amazon inopa vashandisi vane mhinduro dzakarurama kupfuura dzose zvichienderana nezvinodiwa ivo pachavo uye nhoroondo yekutsvaga. Mune mamwe mazwi, Amazon inoita zvose zvinogona kuita kuti zvive nyore kwavari kuti vatenge.
Saka, zvose zvatinofanira kuita kuti tibudirire paAmazon ndeyokugadzirisa marongerwo ako maererano nematungamiri eAmerica. Zvinhu zvitatu zvinonyanya kukosha zvinokanganisa maitiro emuchina paAmerica zvinosanganisira kukosha, kutendeuka, uye chiremera chemagetsi. Muchidimbu ichi, iwe uchawana kuti ungagadzira sei zvinobudirira Amazon SEO sarudzo uye uvandudze chigadzirwa chako chinowanikwa munzvimbo idzi nhatu.
Kuwedzera kukosha kweshizha rako remazvigadzirwa
Chinhu chinokosha cheAmerica chinoshandiswa kugadzirwa kwegorgorithm ndechokufananidza zvinhu zvakakosha nemubvunzo wemushandisi. Icho chinoreva kuti kukosha kweshizha rako remazvigadzirwa kuchakukanganisa zvakananga yako chigadzirwa. Pane zvikamu zvinomwe zvakakosha zvezvikamu zvako zvekutengesa zvaunofanira kufunga nezvazvo:
Amazon title optimization is much more zvakaoma kupfuura paGoogle. Amazon ine zvido zvayo zvekugadzirwa kwepamusoro sezvo izvi zvinogona kukanganisa kushandiswa kwemutengi kwemunhu. Zvinoreva kuti kana zita rako risina kunyatsogadziriswa iwe hauzotongorori kumusoro kuAmerica SERP. Pano iwe haufaniri kutarisira chete nezvemashoko ako anokosha. Iwe unofanirwa kutarisira zvakawanda pamusoro pezvinyorwa zvako zvinyorwa. Zvinonzwisisika kunyora pamusoro pezvakagadzirwa zvako zvakakosha uye unhu, zvisingaverengi mashoko ose ezve. Zvakakosha kureva kuti Amazon yatanga kugadzirisa nekugadzirisa musoro wacho.
Ichi chikamu chikamu chakaiswa pamusoro pechinyorwa. Pano iwe unofanirwa kurondedzera maikirwo makuru emakiti, uchiita shanyo pamusoro pezvipo zvayo. Nhamba dzebhuruti ndezvishoma mitsara inongorondedzera chinhu chinotengesa. Kuverenga mashoko aya, Amazon shopper inofanira kunzwisisa kana achida kutenga chinhu, kana kwete.
Tsanangudzo yezvakagadzirwa inopa mamwe mashoko akawanda. Iyi minda inoshumira kupindura mibvunzo yese yevashandi inogona kuitika uye kuvabatsira kuti vagadzire kutenga chisarudzo. Zvinonzwisisika kugadzirisa tsanangudzo yako yezvigadzirwa uye kuisa imomo mazita anotsvaga anotsvaga. Izvo zvichaita kuti zvive nehuwandu hwekugadzirwa kwako uye kukurudzira kutengesa.
Mutengo uye mugadziri
Kana uri kutengesa zvinhu zvakashandurwa izvo zvinonyatsozivikanwa nevanhu, unofanirwa kuisa nhamba yekugadzira muzita rako.
Amazon search results are displayed according to category range. Ndicho chikonzero iwe unofanirwa kuisa zvinhu pasi peboka rakakodzera.
Sezvandambotaura pamusoro apa, pane zvinomwe zvinotanga kuAmazon. Zvinonzwisisika kuisa yako inotsvaga kutsvaga mazwi mune imwe neimwe kuita kuti kuverenga kwako kuchionekwe pa Amazon SERP. Zvakakosha kutaurwa kuti unofanirwa kudzivisa chero chinhu chipi nechipi chekudzokorora zvinyorwa sezvo zvingave zvisingakanganisi kutora kwako kushambadzira kuAmazon.
Kunyatsoteerera kunofanira kubhadharwa kuma Amazon URL ekugadzirisa sezvo iri nzira yakakwana yekuona kukosha kwekutsvaga nekutsvaga. A standard URL chirongwa inoratidzika se "keyword = yako zvigadzirwa + keyword. "Unogona kuideredza uchishanda purogiramu yakakosha yepaIndaneti, uye pakupedzisira, itaira motokari. Somugumisiro, Amazon ichaona kuti vashanyi vakatsvaga zvishandiso zvenyu nekuda kwekutsvaga mazwi enyu.
Itai kuti mazita enyu akwanise kuchinjwa
. Kana uine yakakwirira yekutendeuka, inoratidza Amazon kuti vashandisi vanoda zvigadzirwa zvako, uye zvichida yako inoratidzwa ichaonekwa pa TOP of Amazon tsvaga. Aya mazano anotevera anofanira kutarisirwa kusimudza maitiro ako kutendeuka.
Chinhu chinonyanya kushandiswa kuAmazon inotengeswa. Kana uine nguva yakareba uye yakanaka yekutengeserana nhoroondo, iwe uchakwiridza kuAmazon SERP. Zvinhu zvinotengeswa nepamusoro pekutengesa nguva dzose zvinotarisa mberi kweAmazambique peji sezvavanounza mari yakawanda kuAmazon.
. Asati atenga kutenga, vashandisi vanowanzotarisa kubvunzurudza kwekare kwevatengi kuti vaone kuti vamwe vashandisi vanoti chii pamusoro payo. Iwe unofanirwa kuunza mamwe maitiro ekugadzira, kunyanya kana uchitumira matsva matsva. Zvisinei, iva nechokwadi chokuti hauiti kuti vatengi vako vanyorere maitiro akanaka sezvo zvingave zvisingakanganisi nzvimbo dzako.
Handizivi chaizvo kuti chikamu nemibvunzo uye mhinduro chinokanganisa sei zvikwereti zvemakiti, asi zvinokosha kana zvakabatana nekuronga nekuda kwekukwanisa kwayo kukanganisa kutendeuka kwenhamba. Kana pasina mhinduro yakajeka kumibvunzo yevatengi, vangafunga kuti iwe hauzivi nezvechigadzirwa kana kuti iwe une usimbe zvekutarisira pamusoro pevatengi vako.
. Iwe unofanirwa kupa vashandisi nekwanisi chekutarisa imwe neimwe yekoni. Ndicho chikonzero nei zvichisarudzwa kuti pixel yemufananidzo denga inofanira kunge inenge 1000 px kana kupfuura. Uyezve, ita kuti uve nemamwe mapikicha emufananidzo wako kuratidza zvose zvinoda.
Kana iwe uri mutengesi weAmazon, iwe pachako uchangotora muhondo yemutengo. Vashandi vanowanzotenga zvinodhura zvakanyanya pamusika. Ndosaka iwe uchida kuchengetedza mutengo wako wekukwikwidza. Kunze kweizvozvo, ndeimwe yezvikonzero kana mutengesi anogona kukunda Bhokisi Rekushandisa.
Deredza kuwedzera kwekutsvaga
Kuwedzera kwehuwandu, uye nguva iyo munhu anoshandisa purogiramu yako yezvigadzirwa, zvinogona kuchinja kutendeuka kwako. Kana mutengi akagara kwenguva yakareba pane peji rako, zvichabatsira kuchinja kutendeuka kwako, uye Amazon inogona kunge ichivandudza nzvimbo yako yepamusoro. Ndicho chikonzero iwe uchifanira kugara uchicherechedza mitero yakadaro kuti ugone kudzokorora urongwa hwako munguva Source .